1, Ubochi mbu n’onwa mbu bu nke an’obughi dika Ememme Ugwu n’oge ochie, ma ana akpo ya ubochi ohuru. 2, N’akụkọ ihe mere eme nke China, okwu a bụ “Ememme Oge opupu ihe ubi” abụghị ememme, kama ọ bụ nrụtụ aka pụrụ iche na “mmalite oge opupu ihe ubi” nke mbara igwe 24 ...
Ekele anyị 11kv & 33KV ugbu a na voltaji nkesa na-agafe KEMA ule
KEMA bụ mkpirisi Dutch (Keuring Van Elektrotechnische Materialen). KEMA azụmahịa akporo ji nwayọọ nwayọọ gbasaa, na-aghọ a na-eduga onwe ha ikike na zuru ụwa ọnụ ike ọrụ ụlọ ọrụ. Kemgbe ihe karịrị afọ 80, KEMA enyerela ndị ahịa aka ịkọwa usoro mgbanwe na s ...
N'èzí 33kV 35kV 36kV 1250A agụụ Circuit emebi Na Ugbu transformer
N'èzí 33kV 35kV 36kV 1250A agụụ Circuit emebi na transformer. Nwere ike ịrụ ọrụ na ọnọdụ ihu igwe: - 40 ℃ ~ + 40 ℃. Simple Ọdịdị, free mmezi na ogologo ọrụ ndụ na-eji na 35kV voltaji larịị, gụnyere efefe ahịrị, ulo oru na Ngwuputa ụlọ ọrụ, ike ụgbọ, subst ...
Gini mere eji ghazie iji ihe onodu ihe ntanye? Nke a bụ iji zere ịchụpụ mita na ịchekwa ego. N'ihe banyere ịchekwa ego, ọnụahịa nke obere mita dị ugbu a na onye na-agbanwe ihe ga-adị ala karịa nke nnukwu mita dị ugbu a. Site na nchebe nke mita eletrik ...
n'èzí agụụ circuit emebi ụkpụrụ
Na sekit ahụ, onye na-agbaji sekit na-eme ihe dịka ikuku, mana ikuku ahụ nwere ike rụọ ọrụ naanị otu ugboro, ebe enwere ike iji ndị na-agbaji okirikiri ugboro ugboro. Ọ bụrụhaala na nke ugbu a ruru n'ogo dị egwu, ọ nwere ike ibute circuit emepe ozugbo. ndụ waya na sekit na-ejikọrọ na nsọtụ abụọ nke sw ...
Njirimara nke nkwụsịtụ fuuji
(1) isi uru nke dropout fuuz cutout ① Ezi nhọrọ. Ọ bụrụhaala na nke dị ugbu a nke njikọ njikọ njikọ nke elu na nke ala dị larịị dabara na ihe achọrọ nke 1.6: 1 nhọrọ oke nhọrọ akọwapụtara na ọkọlọtọ mba na ọkọlọtọ IEC, nke pụtara ọkwa dị elu nke elu ...
COVID-19 bụ ọrịa ọhụrụ malitere ịrịa ọrịa nke na-emetụta ihe karịrị nde mmadụ 1 n’ụwa nile!
site ha na 20-04-04
Enwere ike ibufe site na mmadụ gaa na onye ọzọ. Nje a kwenyere na-ebute site na mmadụ site na onye ọzọ. N'etiti ndị nọ nso (ihe dị ka 2m). Mkpụrụ iku ume iku ume nke onye oria a na-emepụta mgbe ha na-akwa ụkwara, zee zee ma ọ bụ kwuo okwu. Mmiri ndị a nwere ike ịdaba n'ọnụ ma ọ bụ imi nke ...
Isi nnyocha agụụ circuit emebi
Okwu Mmalite nke agụụ circuit emebi “agụụ Circuit emebi” ọkọkpọhi aha ya n'ihi na ya aak emenyụ ọkụ na-ajụ mkpuchi nke oghere kọntaktị mgbe arc emenyụ bụ ma abụọ agụụ; ọ nwere uru nke obere nha, ịdị arọ dị mfe, dabara maka operat ugboro ugboro ...